people Nepal » मेरो बुबा को हो ? मेरो बुबा को हो ? – people Nepal
Posted on August 2, 2018 by Sudip Panta
अस्ट्रेलिया, साउन १७ । पिटर पिकक एउटा रजिष्टर गरिएको चिठी पाएसँगै दङ्ग परेका थिए । उनले सोचेका थिए त्यो चिठी अनलाइनमा गरेको अनुरोध बमोजिम हुलाक कार्यालयमा ठूलो ज्याकेट आएको होला । पूर्व प्रहरी समेत रहेका यी अस्ट्रेलियाली हजूरबुबा चिठी खोलेर आश्चर्यचकित भए ।
लामो विवादपछि भिक्टोरिया राज्यले जारी गरेको नयाँ कानुन अनुसार भार्ताले वीर्य र डिम्बदाताहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । भार्ताले दाताहरु, जन्मिने बच्चा र उनीहरुका आमाबाबुको नामनामेसी राख्ने तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइआएको छ । कतिपय बालबालिकाले आफ्नो पहिचानको खोजी गर्ने इच्छापूर्तिका लागि “मेरो बाबु को हो ?” भन्ने अभियान चलाएका थिए ।